Kabaha qaboojiyaha clothing Dharka bakhaarka qabow • Shaashadda kumbuyuutarka ee P&M
Kabaha qaboojiyaha ee xaaladaha daran
Waaxda dharka qaboojiyaha iyo bakhaarada qabow waxaa jira nooc kabaha qaboojiyaha. IN qaybta kabaha waxaan sidoo kale bixinnaa sharaabaadyo heerkul kululeeysan oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan heerkulka hooseeya. Kabo adag, dhejisyo la xoojiyay iyo dhejis dheeri ah ayaa damaanad qaadaya badbaadada iyo raaxada. Kabaha kaliya maahan astaamo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan qaboojiyaha iyo qolalka qabow, laakiin sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo casri ah.
Keenida BIS kabaha dukaanka qabow
Tayo sare oo loogu talagalay raaxada iyo amniga
Cagaha ayaa ka mid ah qeybaha jirka ee aadka ugu nugul qaboojinta, waana sababta ay muhiim u tahay in si sax ah looga ilaaliyo dhammaan kuwa shaqeeya saacado badan maalin kasta qolalka uu heerkoodu hoos ugu dhaco -45 darajo Celsius.
Marka lagu daro raaxada iyo raaxada, cabirka si sax ah loo xushay, kabaha waa inay bixiyaan difaac wax ku ool ah oo ka dhan ah dhaxan. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan hubinay in moodooyin kaladuwan ay ka muuqdeen dalabka.
Bixinta waxaa ka mid ah kabo qaboojiyaha biyuhu ka galaan oo ka samaysan maqaar diir lo’aad sida BCW kabaha dahaaran, kabaha dahaaran BCU. Waxaan sidoo kale leenahay kabaha dukaanka qabow ee biyuhu galaan BERGIN BIS ka samaysan isku darka PU u adkaysta heerkulka hoose ilaa - 30 darajo. Moodooyinka ugu qaalisan waa kabaha Rockfall.
Kabaha Rockfall Alaska Coldstore waxay ka difaacaan hoos u dhaca illaa -40 digrii, waxay ka samaysan yihiin harag hadhuudh oo tayo sare leh, oo neefsan kara oo aan biyuhu ka soo geli karin. Intaa waxaa sii dheer, waxay leeyihiin aaladda 'Thinsulate Thin B600 sole sole', oo bixisa kuleylka ugu sarreeya iyo xorriyadda xirashada.
Wax soo saarka Rockfall ayaa la heli karaa si loo dalbado 7 maalmood oo shaqo gudahood, maadaama laga soo raro bakhaarkeena ku yaal England.
ROCKFALL Alaska COLDSTORE ilaalinta kabaha dukaanka qabow ilaa -40 ° C
Marka lagu daro kabaha waxtarka u leh shaqada, waxaan sidoo kale bixinnaa sharaabaadyo cayiman, iyadoo kuxiran nooca laga sameeyay dhogorta, nylon ama dharka kuleylka leh. Baaxadda ballaaran ee cabbiraaddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorto badeecad loogu talagalay dumarka iyo ragga labadaba.
Soo bandhigida dharka bakhaarka qabow waxaa ka mid ah alaabada dharka buuxa ee shaqaalaha. Waxaa sidoo kale jira tabs dukaanka surwaal, jaakadaha, galoofyada i isugeyn bakhaarka qaboojiyaha iyo qaboojiyaha.
Kabaha Coldstorekabaha dukaanka qabowkabaha dukaanka qabowkabaha badbaadadaKabo dahaaranKabaha Rockfallkabaha loogu talagalay heerkulka hooseeyakabo takhasus leh